उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मधेसमा अचम्मै लोकप्रिय कसरी बन्दैछन् ? - Dainik Nepal
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मधेसमा अचम्मै लोकप्रिय कसरी बन्दैछन् ?
सन्तोष बराइली २०७५ चैत ३० गते १३:३३
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं नेकपाका नेता ईश्वर पोखरेलको प्रदेश दुई अर्थात् मधेसमा राजनीतिक म्याराथन चलिरहेको छ । सरकारमा सहभागी भएयता यस क्षेत्रका सबै जसो जिल्लामा दोहोर्याएर पुगे । अझ रोचक के छ भने प्रदेश दुईमा केही समययता पोखरेलको लोकप्रियता अचम्म तालले बढेको छ । उनलाई लोकप्रिय बनाउने माध्यम हो– उनले बोल्ने मैथिली भाषा । प्रदेश दुईमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन आउने गरेका पोखरेलले बोल्ने गरेको शुद्ध मैथिली भाषाले जनताको मौलिकतासँग जोडेको छ । यसै कारण पनि लोकप्रियताको दायरा अझ फराकिलो बनिरहेको देखिन्छ ।
प्रदेश दुईमा आयोजना हुने सार्वजानिक कार्याक्रहरूमा भाग लिन आउने गरेका पोखरेलले खाँटी मैथिली भाषामा मन्तब्य राख्ने गरेको प्रसङ्ग आजभोली चर्चाको विषय बनेको छ । चिया र पान पसलहरू अनि कतिपय सार्वजानिक स्थानमा उनको जनमैत्री, भावनामैत्री र सर्वसाधारणनिकट हुने भाषा प्रयोगकै मनग्य चर्चा हुने गरेको छ ।
यस्तैमा गत २५ फागुनमा लाहानमा मैथिली भाषाबाट भाषण गरेर पोखरेलले लाहानवासीलाई अचम्मित तुल्याए । लाहान महोत्सव उद्घाटन गर्न प्रमुख अतिथिका रुपमा लाहान आईपुगेका नेता पोखरेलले मैथिली भाषामा मन्तव्य दिईरहँदा कार्यक्रमस्थलमा उपस्थितहरू अचम्मित मुद्रामा सुनिरहेका देखिन्थे । असली मैथिली भाषीले भन्दा स्पष्ट मन्तब्य राख्दा छक्क नपर्ने कोही थिएन । नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहाका अध्यक्ष दिनेश्वर गुप्ताका भनाईमा पोखरेलले मैथिलीमा यति गज्जवले मन्तब्य राख्लान भन्ने विश्वास थिएन ।
मधेससँग आत्मीय हुनका लागि कुनै भेषभुषामात्र होइन, भाषाको सही प्रयोग हुनुपर्छ । यसले जनतालाई नेता आफ्नो भएको अपनत्व पनि महशुस गराउँछ । जुन कलासहितको ज्ञान मन्त्री पोखरेलमा भेटिएको सर्वसाधारण नै बताउँछन् ।
सार्वजानिका कार्यक्रहरूमा बोल्दा उनले कृषि र पर्यटनलाई महत्व दिने गरेका छन् । सवै राजनतिक दलका स्थानीय नेताहरूको बाक्लो उपस्थिती रहेको लाहान महोत्सव उद्घाट पछि मैथिलीमा मन्तव्य राख्दै पोखरेलले भनेका थिए,‘कृषि आ पयर्टन विकासक लेल सरकार सवेंदनशिल छै ( कृषि र पर्यटन विकासका लागि सरकार सवेंदनशिल छ) ।
सार्वजानिका कार्यक्रहरूमा बोल्दा उनले कृषि र पर्यटनलाई महत्व दिने गरेका छन् । सवै राजनतिक दलका स्थानीय नेताहरूको बाक्लो उपस्थिती रहेको लाहान महोत्सव उद्घाट पछि मैथिलीमा मन्तव्य राख्दै पोखरेलले भनेका थिए,‘कृषि आ पयर्टन विकासक लेल सरकार सवेंदनशिल छै ( कृषि र पर्यटन विकासका लागि सरकार सवेंदनशिल छ) । नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो निर्णयले अप्ठेरो परेको पनि बताएकै थिए ।
मधेसमा बढेको दौड
मन्त्री बनेयता पोखरेलको मधेस दौडाहा बढेको तथ्याकंहरूले पुष्टि गर्छन् । पोखरेलको निजी सचिवालयका अनुसार बारा, पर्सा, सिरहा, सप्तरी र धनुषा महोत्तरी लगायत जिल्लाहरूमा दोहोर्याएर आई सकेका पोखरेल सप्तरी भने छिरेका छैनन् । सप्तरीसगैँ जोडिएको सिरहा जिल्लामा भने उनी मन्त्री बनेपछि दुई पटक आईसकेका छन् ।
तत्कालिन एमालेको मेची–महाकाली अभियान ताका राजविराजमा आयोजित आमसभा विथोल्न खोज्ने ५ प्रदर्शनकारीले प्रहरीसगँको मुठभेटमा ज्यान गुमाएका थिए । हालका प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेस विरोधी भएको भन्दै मधेसवादी दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता एमालेको आमसभा हुन दिने पक्षमा पहिल्यै देखि थिएनन् ।
पोखरेलको राजनीतिक पृष्ठभुमी खोतल्ने हो भने उनले स्पष्ट मैथिली भाषा बोल्दा अचम्म मान्नुपर्ने देखिदैन । २०३२ साल देखि करिव डेढ दशक बढि जनकपुरलाई सेल्टर बनाएर तत्कालिन मालेको सगंठन बनाएका उनले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरूमा खटिएका थिए ।
यिनै जिल्लाहरूमा राजनीतिक गतिविधीलाई तिब्र बनाएको तत्कालिन मालेको मध्यपूर्वी कमाण्डको सचिव पोखरेल थिए भने ईञ्चार्ज थिए हाल नेकपाका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधमानमन्त्री माधव नेपाल । उतिवेला माले प्रतिबन्धित भएकाले सबै नेताहरू भुमिगत थिए । कार्यक्षेत्र मधेस बनाएर भुमिगत राजनीति गरेका पोखरेलले उतिबेलै मैथिली भाषा सिकेका थिए ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण ताका जनकपुरको वाह्रविगाहामा आयोजित सभालाई पोखरेलले नेपालीमा सम्बोधन गर्दा उपस्थित धेरैले हुटिगं गरेर विरोध जनाएका थिए । नेपाली भाषाबाट सार्वजानिक रुपमा भाषण गर्दा विरोध हुने ठानेपछि पोखरेलले प्रदेश दुईमा मैथिली भाषालाई प्रयोगमा ल्याएको बताउनेहरू पनि छन् ।
मालेबाट एमाले हुँदै खुल्ला राजनीतिमा आएपछि पोखरेल २०४८ सालको चुनावमा धनुषाबाट सहभागी भए तर काग्रेंसका आनन्दप्रसाद ढुगंनासगँ झिनो मतले पराजित भएका थिए । सासंद हुँदै पटक–पटक मन्त्री बनेका पोखरेल वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपल्लो तहका नेता मानिन्छन् । उनी तत्कालिन एमालेको माहासचिव थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका लय र गतिमा उनको साथ रहँदै आएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीनजिक राखेर उनलाई हेरिन्छ ।
माधव नेपाललाई टक्कर
मधेसलाई नजिकबाट बुझ्ने नेताको रुपमा नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मानिदै आएको छ । मधेसका जिल्लाहरूमा बाक्लै आउजाउ गर्ने नेताको सुचिमा उनि एक नम्बरमा पर्छन् । सिरहाबाट दोश्रो सविंधानसभाको चुनाव जितेका प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठभुमि मधेससगँ प्रत्यक्ष जोडिएकाले पनि प्रचण्डलाई मधेस बुझ्ने नेताको रुपमा लिईनु स्वाभाविक पनि हो ।
प्रचण्डपछि नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रदेश दुई आउजाउ बढि नै गरिरहने नेता भित्र पर्छन् । नेपालको पुख्र्यौली घर रौतहट हो । तर पछिल्लो समय नेता नेपाललाई माथ दिने गरि पोखरेल मधेसमा आयोजना हुने सार्वजानिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन थालेका छन् । र माधव नेपालले झैँ प्रदेश दुईमा मैथिली भाषामा पोखरेलले पनि आफ्ना भनाईहरू राख्दै आएका छन् । कतिपयले पोखरेलको मैथिली भाषा माधव कुमार नेपालको भन्दा राम्रो भएको बताए ।
माधव नेपालले प्रदेश दुईमा आफ्नो गुटको राजनीति विस्तार गरिरहेका वेला ईश्वर पोखरेललाई अगाडी सारेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति विस्तार गर्न खोजेको भान हुन्छ । वर्तमान ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पोखरेलको बाक्लो आउजाउले ओलीको मधेस दृष्टिमा परिवर्तन आएको बताउनेहरू पनि धेरै छन् । विखण्डनको मुद्दा बोकेर सघँर्षरत सिके राउत समूहलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याएर प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय प्रदेश दुईमा थप चर्चामा छन् । प्रदेश दुईमा पोखरेलले बढाएको पछिल्लो सक्रियताले उनमा रहेको अदभुत राजनीतिक क्षमता पनि देखिएकै छ ।
के नेकपाले बहुदलीयता त्याग्न सक्छ ?
ओली–दाहाललाई केन्द्रीय सदस्यको ‘एक’ प्रश्न
नेपाल कर्मयोगीहरूको देश बनाउनुपर्छ
नगर प्रमुखको हैसियत र नगर बधुको आत्मसम्मान
काँग्रेसका युवाहरु नेकपामा प्रवेश, प्रचण्डले स्वागत गरे